Dawlada Turkiga oo sheegtay in weerarkii shalay aysan u joojin doonin howsha ay ka hayaan Soomaaliya |
Dawlada Turkiga oo sheegtay in weerarkii shalay aysan u joojin doonin howsha ay ka hayaan Soomaaliya
Wasiirka arimaha dibada wadanka Turkiga Axmed Daud Oglo ayaa sheegay in mid kamid ah askartooda amniga qaabilsan lagu dilay weerarkii ismidaminta ahaa ee lagu qaaday dhismaha labaad ee safarada Turkiga ee Somalia ku leedahay waxana uu shaca ka qaaday in ka feejignaan dhanka amaanka oo horey u jirtay ay suurta galisay inuu yareeyo Khasaraha weerarkasi.
Bakar buzadag ah ku xigeenka raisal wasaraha wadanka turkiga ayaa ku sheegay werarkii lagu qaday dhismaha labaad ee safarada turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho ay aheyd mid waxuushnimo ah oo argagexiso.
Buzadag ayaa u tacsiyadeyay eheladii dadkoodi ay ku geeriyoden werarka ismidaminta kuwa dhawacmayna u rajeeyay in cafimad dag dag,waxana uu tilmaamay in shaqalahooda kaga sugan Somalia ay shaqadooda tahay arimo bini aadanimo si ay u taageeraan shacabka wadanka Somalia.
Masulkaasi waxa uu shegay in xukuumada Somalia ay la xiriiren waxana xukuumada ku wargalisay dowlada turkiga in ay gudi u saartay werarkasi baaritaankisa.
Waxay sheegeen dawlada Turkiga inay howshooda ay kawadaan Somaliya inay sii wadayaan oo aysan ujoojin weerarkii shalay galab lagu qaaday xarun ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho.